Sazina ny Vavolombelon’i Jehovah Miresaka ny Zavatra Inoany | Vaovao Ara-pitsarana JW.ORG
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Anglisy Armenianina Azerbaijaney Chichewa Danoà Espaniola Estonianina Failandey Frantsay Grika Géorgien Holandey Hongroà Indonezianina Iokrenianina Italianina Japoney Kinyarwanda Kirghiz Koreanina Kroaty Litoanianina Malagasy Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Norvezianina Poloney Portogey Romanianina Rosianina Serba Serba (Soratra Romanina) Slovaky Slovenianina Soedoà Swahili Tagalog Tailandey Tiorka Tseky Yorobà
13 DESAMBRA 2016
Lamandy no Miandry ny Vavolombelon’i Jehovah Miresaka ny Zavatra Inoany
Notsarain’ny fitsarana tao Goranboy, any Azerbaïdjan, i Ziyad Dadashov, tamin’ny 2 Desambra 2016. Ny polisy miandraikitra an’ilay faritra no nitory azy satria hoe Vavolombelon’i Jehovah izy ary nanao asa mifandray amin’ny fivavahany. Lehilahy efatra avy ao an-tanànany no nijoro ho vavolombelona hoe niresaka tamin’izy ireo momba ny fivavahany Atoa Dadashov ary nanome azy ireo boky ara-baiboly. Nilaza ny Mpitsara Shirzad Huseynov, ao amin’ny Fitsaram-paritr’i Goranboy, hoe meloka ho nanao asa tsy ara-dalàna mifandray amin’ny fivavahany * izy, ary nasainy nandoa lamandy 1 500 manat (2 800 000 ariary eo ho eo). Mieritreritra Atoa Dadashov hoe tsy tokony hosazina izy ka hampakariny any amin’ny fitsarana ambony ilay raharaha.
Mitsidika tsy tapaka ny ramatoa iray ao amin’io faritra io koa i Jaarey Suleymanova sy Gulnaz Israfilova, vehivavy roa Vavolombelon’i Jehovah. Efa volana maromaro izay izy roa vavy no nifampidinika ny Baiboly tamin’io ramatoa io. Niampanga azy roa vavy ho nanao asa mifandray amin’ny fivavahana “any ivelan’ny faritra ekena ara-dalàna” àry ny polisy miandraikitra ny faritr’i Goranboy. Nasain’ny Mpitsara Ismayil Abdurahmanli handoa lamandy 2 000 manat (3 700 000 ariary eo ho eo) izy roa vavy, tamin’ny 17 Novambra 2016. Mampakatra an’ilay raharaha any amin’ny fitsarana ambony koa izy ireo.
Hoy i Jason Wise, mpahay lalàna iraisam-pirenena momba ny zon’olombelona: “Tsy manaja ny Fifanarahana Eoropeanina i Azerbaïdjan satria manavakavaka ny Vavolombelon’i Jehovah. Tsy mifanaraka amin’ny fenitra momba ny fahalalahana ara-pivavahana ny ataon’ny manam-pahefana any amin’ny faritr’i Goranboy, nefa milaza ho manaraka an’izany i Azerbaïdjan.”
^ feh. 1 Voasoratra ara-dalàna any Bakou, renivohitr’i Azerbaïdjan, ny Vavolombelon’i Jehovah. Ny Andininy faha-515.0.4 ao amin’ny Fehezan-dalàna Momba ny Fanoherana ny Fitantanana no voalaza hoe nodikain’Atoa Dadashov. Voalaza ao hoe voarara ny “fikambanana ara-pivavahana manao zavatra any ivelan’ny faritra ekena ara-dalàna.”
Nosazina sy Nogadraina i Rashad Niftaliyev fa Nanatrika Fotoam-pivavahana